ကြေးပန်းပုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Bronze Sculpture Factory
ပူပြင်းတဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်ကြီးမားတဲ့ပြင်ပဘဝအရွယ်အစားရှိတဲ့ကြေးဝါခြင်္သေ့ရုပ်ထု
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အသေးစိတ်ပစ္စည်း: သတ္တု၊ သတ္တု၊ ကြေးနီ, ကြေးဝါ, ကြေးဝါအမျိုးအစား: ကြေးဝါကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: ထွင်းထု, သတ္တုများပုံသဏ္:ာန်: ရေကြောင်း, morden အသုံးပြုမှု: အိမ်အလှဆင်ခြင်းအကြောင်းအရာ: တိရိစ္ဆာန် Ca ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ဖော်ပြပါဇာစ်မြစ်: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်: ARTISAN အလုပ်လုပ်ပုံနံပါတ်: BAZ0035 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ကြီးမားသောအပြင်ဘက်ကြေးဝါလင်းယုန်ပန်းပုပန်းပုအရောင်: ကြေးဝါအရောင်ပစ္စည်း - ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ သတ္တုအရွယ်အစား - L 100-200 သက်တမ်းအရွယ်သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခြင်း: အလှဆင်ခြင်း၊ အနုပညာနှင့်စုဆောင်းနိုင်သော၊ ပြင်ပပန်းသုတ်ခြင်း: ရှေးဟောင်းပန်းကန်ပုံစံ: morden, ရေကြောင်း OEM: YES MIN: 1PCS နည်းစနစ်: Casting, Casting အမျိုးအစား: ကြေးအမျိုးအစားထုတ်ကုန်: Scu ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ဖော်ပြပါအရင်းအမြစ်နေရာ: Hebei, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာသည်များအမှတ်အသား - BM-6110 အမျိုးအစား - ကြေးဝါမျောက်များ၊ ကြေးအရောင် - ကြေးအရောင် (သို့) တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပစ္စည်း - သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ သတ္တုအရွယ် - ၈၀ စင်တီမီတာမှ ၂၀၀ စင်တီမီတာ သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခြင်း: အလှဆင်ခြင်း၊ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံအမည် - ကြေးဝါတိရိစ္ဆာန်မျောက်ရုပ်ထုအထူ - ၅ မီလီမီတာ - ၈ မီလီမီတာစတိုင် - မော်ဒန်၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ OEM: ဟုတ်ကဲ့! ကြိုဆိုသည်။ MIN: 1PCS ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: Casting ...
Keyword: Marble Jesus ပန်းပုလက်ရာ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုရယ်မောရွှင်လန်းစွာကိုးကွယ်သောဘ ၀ အရွယ်ရှိကြေးဝါရွှေပန်းပုရုပ်ထု
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပစ္စည်း: သတ္တု၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ စကျင်ကျောက်အမျိုးအစား - ကြေး၊ ရုပ်တုများကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ပန်းပုနည်းစနစ် - သွန်းခြင်းပုံစံ - ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု - အနုပညာနှင့်စုဆောင်းနိုင်သောအကြောင်းအရာ - ဗုဒ္ဓဘာသာဒေသဆိုင်ရာလက္ခဏာ - တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Artisan Works Model နံပါတ်: BB-2390 အမည်: ကြေးဝါရယ်မောသောဗုဒ္ဓပန်းပုအသုံးပြုခြင်း - အပြင်ပန်း၊ ဥယျာဉ်အလှဆင်အရောင်: ရွှေ၊ ကြေးဝါနှင့်ကြေးဝါအရွယ်အစား: H: 150-180cm (သို့) စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း: အတွင်းရှိအမြှုပ်များနှင့်သစ်သားသေတ္တာများ ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမူလနေရာ - Hebei, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာသည်များအမှတ်အသား - BLH-1200 အမျိုးအစား - ကြေးဝါခြင်္သေ့ခေါင်း၊ ကြေးအရောင် - ကြေးဝါသို့မဟုတ်တောင်းဆိုသည့်ပစ္စည်း - သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ သတ္တုအရွယ်အစား - ၅၀ စင်တီမီတာသို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခြင်း: အလှဆင်ခြင်း၊ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံအမည် - ကြေးဝါတိရိစ္ဆာန်ရုပ်ထုအထူ: ၅-၈ မီလီမီတာစတိုင်: morden, ရိုးရာအနုပညာ OEM: ဟုတ်ကဲ့! ကြိုဆိုပါတယ် MIN: 1PCS ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: Casting Use: Art & ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းနေရာ: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာလုပ်ငန်းအမှတ်အသား: BAK001 အမည်: ဥယျာဉ်အလှဆင်ကြေးမြင်းရုပ်ထုအရောင်: ကြေးဝါအရောင်အသုံးပြုမှု: အလှဆင်နံရံ: ရှေးဟောင်းပန်းကန်အထူ: 5mm-8MM ဒီဇိုင်း: စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ OEM: OEM ဝန်ဆောင်မှုများ MOQ: 1pcs ငွေပေးချေမှု: T / T သို့မဟုတ်ဗီဇာခရက်ဒစ်ကတ်သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သောလျှောက်လွှာ။ Park: ပစ္စည်းအမျိုးအစား: သတ္တုအမျိုးအစား: ကြေးအမျိုးအစားထုတ်ကုန်အမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: Casting S ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းနေရာ: Hebei, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာသည်များနံပါတ်: BA0117 အမည်: ခြင်္သေ့ခေါင်းနံရံရေအင်္ဂါရပ်ပစ္စည်း: သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ၊ သတ္တုအရောင်: ကြေးအရောင်အသုံးပြုမှု: အလှဆင်ခြင်း၊ အနုပညာနှင့်စုဆောင်းနိုင်သော၊ ပြင်ပ အရွယ်အစား: ၅၀ * ၆၁ * ၂၃ စင်တီမီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ခြင်း - ရှေးဟောင်းပန်းကန်ပုံစံ - မော်ဒန်စတိုင်၊ ရှေးဟောင်းတုပသည့် OEM: YES MIN - 1PCS နည်းစနစ် - Casting, Casting အမျိုးအစား: ကြေးအမျိုးအစားကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုအကြောင်းအရာ ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပစ္စည်း: သတ္တု၊ သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါအမျိုးအစား: ကြေး၊ ကြေးဝါခြင်္သေ့ခေါင်းကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: Casting ပုံစံ: ရေကြောင်း၊ morden အသုံးပြုမှု: အနုပညာနှင့်စုဆောင်းနိုင်သောအကြောင်းအရာ: တိရိစ္ဆာန်ဒေသတွင်းအသွင်အပြင်: ဥရောပမူရင်း - Hebei , တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာသည်များအမှတ်အသားနံပါတ်: BLH-1200 အရောင်: ကြေးဝါသို့မဟုတ်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းအရွယ်အစား: 50cm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုမှု: အလှဆင် / အိမ် / ဟိုတယ် / ဥယျာဉ် / ပန်းခြံအမည်: ကြေးဝါတိရိစ္ဆာန် st ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်းနေရာ: Hebei, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: လက်မှုပညာသည်များအမှတ်အသား: BLH-1206 အမျိုးအစား: ကြေးဝါလူသားပန်းပု၊ ကြေးအရောင်: ကြေးဝါသို့မဟုတ်တောင်းဆိုထားသောပစ္စည်း - ကြေး၊ ကြေး၊ ကြေးဝါ၊ သတ္တုအရွယ်အစား - ၁၅၀ စင်တီမီတာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုမှု : အလှဆင်ခြင်း၊ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံအမည် - ကြေးဝါတိရိစ္ဆာန်ရုပ်ထုအထူ - ၅ မီလီမီတာ - ၈ မီလီမီတာစတိုင် - မော်ဒန်၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ OEM: ဟုတ်ကဲ့! ကြိုဆိုသည်။ MIN: 1PCS ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: သတ္တုများထုတ်လုပ်မှု: အနုပညာနှင့် ...
ကြီးမားသောသွန်းလုပ်ငန်း Yard ပန်းပုကြေးနန်းပျံမြင်းရုပ်ထု
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပစ္စည်း: သတ္တုအမျိုးအစား: ကြေးတံပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: သတ္တုများပုံသွန်းခြင်း: ရေကြောင်းဖြင့်အသုံးပြုမှု: အိမ်အလှဆင်ခြင်းအဓိကအကြောင်းအရာ: တိရိစ္ဆာန်ဒေသဆိုင်ရာအသွင်အပြင် - ဥရောပမူရင်း - ဟေဘေ၊ တရုတ်တံဆိပ်အမည်: လက်မှုပညာသည်အလုပ်အမှတ်အသား - နံပါတ် BAK003 အမည် - ကြေးမြင်း ပန်းပုအရောင်: ကြေးဝါအရောင်အသုံးပြုမှု: အလှဆင်နံရံ: ရှေးဟောင်းပန်းကန်အထူ: 5mm-8MM ဒီဇိုင်း: စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ OEM: OEM Services MOQ: 1pcs PAYME ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များပစ္စည်း: သတ္တု၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါအမျိုးအစား: ကြေး၊ ကြေး၊ mermaid ရုပ်ထုကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ပန်းပုနည်းစနစ်: Casting ပုံစံ: ရေကြောင်း, morden အသုံးပြုမှု: အနုပညာနှင့်စုဆောင်းနိုင်သောအကြောင်းအရာ: တိရိစ္ဆာန်ဒေသတွင်းအသွင်အပြင်: ဥရောပမူရင်း - Hebei, China ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Artisan works စံနမူနာနံပါတ်: BLH-1202 အရောင်: ကြေးအရောင်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းအရွယ်အစား: 150cm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုမှု: အလှဆင် / အိမ် / ဟိုတယ် / ဥယျာဉ် / ပန်းခြံအမည်: ကြေးဝါတိရိစ္ဆာန် sta ...
123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁/၆၁